(Nature) Aircon bus တွေ ဘာကြောင့် အရမ်းအေး 10July 2011 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » (Nature) Aircon bus တွေ ဘာကြောင့် အရမ်းအေး 10July 2011
(Nature) Aircon bus တွေ ဘာကြောင့် အရမ်းအေး 10July 2011
Posted by nature on Jul 10, 2011 in Creative Writing, Think Different | 8 comments
လွန်ခဲ့သော ၁၅နှစ် ခန့်က မြန်မာပြည်က ခရီးသည်တင် ကားတွေဟာ BM Hino Car တွေကိုသာ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကားတွေဟာ ခရီးဝေးသွားရင် အိပ်ရတာ အဆင်မပြေပါ။ အင်မတန် ခရီးပန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ကား ရှိတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ် ခရီးသွာကြပါတယ်။
အခုတော့ တခေတ် ပြောင်းလာပါပြီ။ ခရီးသည်တင် ကားတွေဟာ Aircon Bus တွေကိုသာ သုံးလာကြပါတယ်။ Aircon Bus တွေဟာ ခရီးဝေးသွားရင် အိပ်ရတာ အဆင်ပြေတဲ့အတွက် ခရီးသွားရတာ ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိလာပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ခရီးသွားသလို ယာဉ်မောင်း ၁ယောက်လည်း မလိုတော့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီ နောက်ပိုင်းမှာ ခရီးသွားရင် Aircon Bus တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲလာကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။
ကျနော်လည်း စီးလုံးငှား Aircon bus နဲ့ ခရီးသွားတုန်းက အတွေ့အကြုံလေးတခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကြာတော့ကြာပါပြီ။ အဲဒီတခေါက်က Aircon Bus စ စီးဘူးတာပါ။ Aircon Bus စီးဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတယောက်က Aircon အရမ်းအေးလို့ စောင်ယူသွာဖို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်က မလိုအပ်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ လိုလိုမယ်မယ် ယူခဲ့ပါတယ်။ ကားစထွက်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့စကားမှန်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ရက်ရက်စက်ကိုအေးပါတယ်။ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး စောင်ကိုပါခေါင်းဖူးခြုံ ထားမှသက်သာပါတယ်။ Aircon ကအေးလွန်းလို့ Aircon လေပေါက်ကို မှန်ဘက် လှည့် ထားလိုက်တဲ့အခါ Aircon လေဟာ မှန်ကနေ တဆင့် ခြေထောက်ကို လေကြောင်းက ရောက်လာလို့ ခြေထောက် အေးပြန်ပါတယ်။ အအေးဒဏ်ကို မခံနိုင်တဲ့ ခရီးသည်တယောက်က အအေး လျှော့ပေးဘို့ ပြောတော့ လျှောလို့မရဘူးလို့ ယာဉ်မောင်းက ပြောပါတယ်။ ကား အသစ်မို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် မကြေနပ်ပါဘူ။ Aircon ကို လူတိုင်းလိုလို တွေ့ဖူးနေကြတာပဲ။ အလျှော့အတင်း လုပ်လို့မရတဲ့ Aircon ကို တွေ့ဖူးပါသလား။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အသွားခရီး မှာ တလမ်းလုံး အအေးဒဏ်ကို ခရီးသည်တွေ တော်တော်လေး ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ လိုရာခရီးရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အပြန်ခရီးမှာတော့ အသွားတုန်း အအေးဒဏ်ကို တော်တော်လေး ခံခဲ့ရတဲ့ ခရီးသည်တွေဟာ အအေးဒဏ်ကို ကာကွယ်ဘို့ လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ် အပြည့်ယူလာကြပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ အပြန်ခရီးမှာ အအေးဒဏ်ဟာ နေသာရုံလေး အနေတော်လေးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသွားတုန်းက အေးလွန်းလို့ လျှောခိုင်းတာ လျှော့မရပဲ အပြန်ကျမှ ဘာဖြစ်လို့ အနေတော် ဖြစ်နေရတာပါလဲ။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ယာဉ်မောင်းတွေဟာ ခရီးသည်တွေ အရမ်းအေးပြီး မခံနိုင်ရင် Aircon ပိတ်ဖို့ပြောမှာကို မျှော်လင့်နေပုံ ရပါတယ်။ ခရီးသည်တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ Aircon ပိတ်ပြီးမောင်းရင် သူလည်းအပြစ်မဖြစ်တော့ပဲ ဆီပို(Diesel)ရပြီး ပိုတွက်ခြေကိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Aircon ကားများဟာ အရမ်းအေးနေရတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ မကြာခင်လေးတင်ကမှ ဒီအဲကွန်းကား
ကိုပေါက် post ကိုဖတ်ပြီး idea ရတာလေ။
Aircon Bus ကအမျိုးမျိုးဆိုတော့ ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ပိုတိတိကျကျပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Aircon Bus အများစုမှာ aircon ကို သီးသန့်အင်ဂျင်ငယ်တခုနဲ့မောင်းပါတယ်။ အဲဒီအင်ဂျင်ငယ်(2c ခန့်) ကို အနှေးအမြန် တင်/ချ ပေးတဲ့စံနစ်ဟာ ကားအားလုံးနီးပါးမှာ ပျက်နေတတ်ပါတယ်။ ကားမောင်းဘို့ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့ အချိန်ကုန်ခံ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး မပြင်ကြပါဘူး။ အဲဒါဆိုရင် အင်ဂျင်က ပုံသေနှုံးနဲ့ပဲလည်နေပြီး aircon ရဲ့ compressor ကလဲ ပုံသေနှုံးနဲ့ပဲ လည်ပတ်ပါတော့တယ်။ အဲဒီလိုအခါမှာ အအေးကို အလျှော့အတင်းလုပ်မရတော့ပဲ အင်ဂျင်ကိုပိတ်တာ ဖွင့်တာပဲလုပ်လို့ရပါတော့တယ်။ အင်ဂျင်ကို ရပ်လိုက် မောင်းလိုက်လုပ်နေရင် တချိန်ချိန်မှာ ပြန်မောင်းမရတော့မှာမျိုး ဘယ်ကားဒရိုင်ဘာမှ အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် တချိန်လုံး မပိတ်ပဲ ပုံသေမောင်းနေလို့ အအေးချိန်မြင့်တက်နေတာပါ။
ရာသီဥတုလဲကောင်းပြီး ခရီးသည်လဲ လူညီရင်တော့ ကားခေါင်မိုးပေါ်က လေ၀င်ပေါက်ကို မကြာခဏ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်ပေးဘို့ စပယ်ယာကိုပြောရင် အအေးချိန်ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ စပယ်ယာကိုတော့ မုန့်ဘိုးနဲနဲပေးရမှာပေါ့။
Air conditioner (often referred to as AC or air con.) ဆိုတာက.. လေကို..အပူအအေး အလိုရှိရာထိန်းကျောင်းတာခေါ်တာမို့ … ထိန်းလို့မရရင်..air con ခေါ်စရာမလိုတော့ပါဘူး..။
ဆိုတော့.. အအေးလွန်နေရင်..conditioning လုပ်တဲ့စံနစ်ပျက်နေရင်.. မန်နျူရယ်..လူက..ခေါင်မိုးလေ၀င်ပေါက်နဲ့ ဖွင့်ပိတ်လုပ်ယုံပဲလို့ထင်ပါကြောင်း..။
ကျွန်တော်က တော့ ဘေးက လိုက်ကာ စ ဆွဲပြီး ပစ္စည်းတင်တဲ့ ကြားထဲ ထိုးထည့်ထားလိုက်တာပဲ
အဲဒီတော့ လေးပေါက်ပိတ်သွားတော့ အအေးဒဏ်သက်သာသွားတာပေါ့…
အိန္ဒိယ သွားတုန်းက ဆောင်းတွင်းဘက်ကြီး အေးလိုက်တာ လွန်ပါရေ.. အပြင်မှာတောင် ရေခဲမှတ်နား နီးနေတာ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းအောင် အဲကွန်းဖွင့်ပေးရှာတယ်.. ကားမောင်းတဲ့ ကုလားက အရမ်းသဘောကောင်းတယ်။ အေးတယ် လျော့ပေးဆိုတော့ ပြန်ပြောတယ်.. ဖွင့်တာနဲ့ ပိတ်တာ ၂မျိုးပဲ ရတယ်။ ဒီက ကားက ဒီလိုပဲတဲ့.. ဒါဆိုလည်း မတတ်နိုင်ဘူး အေးတယ် ပိတ်ပါလို့ တောင်းဆိုပြီး ပိတ်မောင်းတာတောင် အပြင်ရာသီဥတု အေးလို့ ကားဘောင်နဲ့ ကပ်လျက်ထိုင်တော့ လူ တခြမ်းအေးတာမှ ခြေတွေ လက်တွေတောင် ကပ်တယ်။
ဘန်ကောက် မှာ အဝေပြေးကားစီးဘူးတယ် ၀န်ဆောင်မှု အနေနဲ့လားမသိဘူး စောင် ပေးတယ် ခလေးစောင်လောက်တော့ရှိမယ် ခပ်ထူထူပဲ ခရီးဆုံးတော့ ယူပြန်တဲ့သူရှိသလို မယူတဲ့သူလဲရှိတယ် ကျွန်တော်လဲထားခဲ့တယ် ယူရမှာရှက်လို့….:)